“ဘယ်မလဲ မဲတစ်ပြား” တဲ့ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » 2010/2012/2015 Election » “ဘယ်မလဲ မဲတစ်ပြား” တဲ့
“ဘယ်မလဲ မဲတစ်ပြား” တဲ့
Posted by ဂျစ်စူ on Mar 31, 2012 in 2010/2012/2015 Election, Creative Writing | 14 comments
မနက်ဖြန် ဆိုတာနဲ့မဲတွေ ထည့်ရတော့မယ်
ခုထိ ဘာမဲတစ်ပြားမှ မရသေးဘူး..အဲတာနဲ့ ..
ကိုယ်တစ်ယောက်ထဲလား အောင့်မေ့တာ ကိုယ့်လိုပဲ မရတဲ့လူတွေတစ်ပုံကြီးဗျာ
တစ်ချို့ ဆို တစ်လမ်းလုံးကို လာမပေးသေးတာ..
ထည့်ချင်လွန်းလို့ တစ်ချို့များ ခွပ်ဒေါင်းအလံတွေ၊စတစ်ကာတွေ ကားမှာကပ်၊အိမ်မှာချိတ်၊ဆိုင်ကယ်မှာလွင့်
နောက်ဆုံး စက်ဘီးဆိုက်ကားတောင် ခွပ်ဒေါင်း အလံတလူလူနဲ့မို့ကိုယ်တောင် မျက်စိနောက်မိသေးတယ်
ထည့်ချင်သပမို့မဲပေးမည် NLD ဆိုတဲ့လူတွေမှ တစ်ပုံကြီးပေါ့ဗျာ..
သူ့ မေဂျီးဒေါ်အပြားမှာ ရေးပြီး သွားထည့်ရမှာလားဗျာ
မဲမရသေးလို့ရပ်ကွက်ရုံးသွား
ရပ်ကွက်လူကြီးက ကော်မရှင်မူးကို ဘောလီဘောပုတ်တယ်
ကော်မရှင်မူးကိုမေးတော့ တက္ကစီသွားဆွဲတာ မနက်ကတဲကဆိုပဲ
အေလိုးကလဲ အဲလောက်တောင်အ၀ှာဖြစ်နေရင် လခွီးမိုလို့ ကော်မရှင်မူးနေသေးလား မသိ
တစ်ချို့ ကော်မရှင်မူးတွေ ဘယ်ချောင်သွားမူးနေလဲမသိ.
ကော်မရှင်မူးမတွေ့ လို့ ရပ်ကွက်ရုံးလာလာမေးကြတာလဲ တစ်ဖွဲ့ ပြီးတစ်ဖွဲ့ 
မဲမရလို့ လူတွေက ပူညံပူညံဖြစ်နေပြီ
သတ်မှတ်ရက်အမှီ မဲမရရင်ကြရင် ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတာ လူတွေက ကြိုသိပြီးသား
အေလိုးတွေလက်ထဲ မသမာမဲတွေ မရောက်အောင်တော့ အတတ်နိုင်ဆုံး လှုပ်ရှားနေကြတာတွေ့ တော့
ပြီးခဲ့တဲ့ ရွေးဂေါက်ပွဲတုန်းက ဒီလောက်မဟုတ်ဘူး၊ဒီလောက် မထ.ကြွ ကြဘူး
အခုတော့ ကိုယ်တိုင်လာပြီး မဲတွေလာလာတောင်းနေကြတာ အားရစရာဗျ
မဲ မရတဲ့လူတွေလဲ NLD အဖွဲ့ ဆီတောင် သွားပြီး သတင်းပို့ကြသလားမသိ သိရသလောက်
မဲ မရတဲ့လူတွေအတွက် လာဖြေရှင်းပေးမယ်လို့ ကြားမိတယ်..
ခင်ဗျားတို့ တွေကော မဲတစ်ပြား ရကြ ပြီးပြီလားဗျ
မရတဲ့လူတွေအတွက် ထည့်ခွင့်မရှိပဲ ပြီးသွားရင် ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဗျ
ကလိန်ကကျစ်တွေ၊လုပ်ကြံမဲတွေ မပါအောင် ဘယ်လိုဖြေရှင်းပေးကြမလဲ
တာဝန်မကျေတာ ဟို ကမကလ တွေ၊ ငလမသတွေ၊ နှမလတွေ၊ ခွမသတွေ အဲကောင်တွေ သတိထားကြပါ။
မဲမရတဲ့လူတွေ ဧရာဝတီ့ဘလော့ဂ်မှာ တွေ့ တာနဲ့  ကူးယူဖော်ပြပါရစေ
မန္တလေး မဟာအောင်မြေ ရဲမွန်တောင်ရပ်ကွက် မဲရုံအမှတ် ၁ ရှေ့ မြင်ကွင်းများ (ဓာတ်ပုံ – မန်းသားလေး/ဧရာဝတီ)
မှတ်ပုံတင် ရှိတယ်၊ ဒီရပ်ကွက် အိမ်ထောင်စုစာရင်းရှိတယ်၊ ဒါပေမယ့် မဲစာရင်းမှာ နာမည် မပါလို့ မဲပေးခွင့်မရတဲ့အတွက်ကြောင့် မှိုင်တွေနေသော မိသားစု
ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ် ၈၉ ရပ်ကွက် မဲရုံ ၁တွင် မဲစာရင်းနံပါနတ် ၈၇၀ မှာ သေဆုံးပြီးသူ၏ မဲစာရင်းဖြစ်သော်လည်း ထိုမဲစာရင်း နံပါတ်၊ အမည်ဖြင့် နံနက် ၇နာရီ မိနစ် ၃၀ အချိန်တွင် လာရောက် မဲပေးသူ ရှိခဲ့ကြောင်း သိရပါသည်။
ဆိုသတဲ့..တတ်လဲတတ်နိုင်တဲ့ ဖွတ်တွေပကလားလို့ ပဲ…
ကျုပ်ကတော့ မဲပေးရမှာ ။ မသိလို့ မေးပါရစေ ။ မဲ က အိမ်တိုင်ရာရောက် လာပေးတာလား ။ ၂၀၁၀ တုန်းကလိုဘဲ ၊ မဲရုံမှာ သွားပေးရမှာ မို့ လား ။ အခုချိန်ထိတော့ ကျုပ်တို့ ရပ်ကွက်ထဲမှာ ဘာသံမှ ကို မကြားရသေးတာ အမှန်ပါဘဲ ။ ၂၀၁၀ တုန်းကတော့ မတိုင်ခင် တစ်လလောက်ကတဲက ရပ်ကွက်ထဲမှာ ဆိုင်ရာတွေ က လိုက်ပြီး အော်ကြ ၊ မဲရုံးကဘယ်နေရာမှာပါဆိုပြီး အိမ်အရောက်လာပြောလို့ ပြောနဲ့ ဗျ ။ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် မနက်ဖန်ကတော့ ခွပ်ဒေါင်းအတွက် ရင်တွင်းဖြစ် ဆန္ဒမဲ တစ်မဲ သွားပေးဖို့ လယ်ဒီဖြစ်နေကြောင်း ပါလေ ။
များတို့ ဆီတော့ အရင်က ပေးနေကြနေရာက မဲရုံအတိုင်းပဲ သွားပေးရမှာဂျ အူးပေရ
၂၀၁၀ တုန်းကလို အိမ်ကိုတော့ စလစ်တွေမပေးတော့ဘူး
ကြည့်ရတာ ကော်မရှင်မှူးတွေများ ဖိအားပေးခံနေရတာလား ဟီးဟီး
ကျုပ်တို့ဆီမှာတော့ အရင်က မဲစာရင်းများလိုက်ဝေသော ကလေးကာကွယ်ဆေးထိုးရန် ဘာနေ့ ညာနေ့ ချီတက်ရန် မတက်ပါက လူငှားဖို့ ငွေ ၅၀၀ ပေးရန် ဘာအတွက် ညာအတွက် ဘာကြေး ညာကြေး ဆိုပြီး လာနေကြ ကောက်နေတောင်းနေကြ ရာအိမ်မူးကစ ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမူးအဆုံး ဘယ်သူမှ မဲကိစ္စနဲ့ပါတ်သတ်လို့ လူပ်ရှားမူလုံးဝမတွေ့ရပါဘူး…
NLD လူများကသာ တအိမ်ဝင်တအိမ်ထွက် မဲစာရင်းပေးခြင်း စလစ်ပြားဝေခြင်းများလိုက်လုပ်နေတာတွေ့ရပါတယ်..
အဲဒီ ရာအိမ်မူးတွေ တော်တော်မအားဘူးထင်တယ် …:D
ပြည်သူတွေရဲ့ လိုလားချက် ပဲလေ။
ဒါလဲလေ ဟိုနေ့က အဒေါ်ဂျီးရဲ့ မဲမဲကြီး တစ်ပြား မဖြစ်ဖို့ လိုသနော ။
မဲ … မဲ … မဲ …
မဲ ဆိုကတည်းက မဖြူလို့ပေါ့ကွယ် …
ငွေလမင်း ရဲ့ အဝေးက လူ တွေ ဖြစ်နေလို့ အနီးက လူတွေလို မလှုပ်ရှားနိုင် တာဝန် မကျေနိုင်တာကို စိတ်မကောင်းဘူး။
ဒါပေမဲ့ ခွပ်ဒေါင်းတွေ အတွက် ရင်ဘတ်ကြီး နဲ့ ကို အားပေးနေပါတယ်။
နိုင်တဲ့ အခါလဲ မာန်မတက်ဖို့၊ ဟန်ရေးသိပ်မပြဖို့ ပြင်ဆင်ထားကြပါ။
တကယ်တော့ မဲနိုင်တာဟာ ဒီမိုကရေစီ တော်လှန်ရေး မှာ နိုင်တာလို့ မပြောနိုင်သေးပါ။
အဲဒီတော့ မှသာ တော်လှန်ရေး အစ ဖြစ်မှာပါ။
ခြေလှမ်း မမှား ကြဖို့ ဂရုစိုက်ပါ။
All the Best NLD!
နီက ဗိုက်လေးဆိုဒေါ့ တွတ်ပီ ဘယ်သွားလဲ နီ့အမ မတေးမျှင်ကော နေကောင်းလား
ပြောကြားခဲ့သူကတော့ နေပြည်တော် မြို့ တော်စည်ပင် တွဲဘက်အတွင်းရေးမှူးဖြစ်တဲ့ 
ဗိုလ်မှူးကြီးဟောင်း ဦဝင်းဌေး ဖြစ်ပါတယ်။
ပုံစံငယ်များဖြင့် ပြသပြီး (ပူတွဲပါပုံအတိုင်း) မဲ့ ပေးကြဖို့ လည်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ကြံခိုင်ရေးအနိုင်မရပါက ထောက်ပံကြေး ကျပ်(၃၀၀၀၀၀)သုံးသိန်း အား ဖြတ်တောက်ခံ
ရနိုင်ကြောင်းလည်း ဌာနမှူးများမှတဆင့် ခြိမ်းခြောက်ပြောကြားခိုင်းခဲ့ ပါတယ်။
အဲဒီနောက် ၀န်ထမ်းအိမ်ယာ အတွင်းမှာလည်း ကြံခိုင်ရေးကို မဲ ပေးရန် မဲ ပုံ
စံငယ်များဝေပြီး ဒီအတိုင်း မပြောင်းလဲပဲ မဲပေးရန်အမိန်ပေးခဲ့ ပါတယ်။
သမ္မတကြီး အနိုင်ရခဲ တဲ့မဲဆန္ဒနယ်ကနေ ကြံခိုင်ရေးမနိုင်ရင် လစာ ဘယ်တော့ 
မှမတိုးနိုင်ဟု လည်း ပြောကြားခဲ့ ပါတယ်။ ပူးတွဲပါ စာရွက်များအား ၀န်ထမ်းများအိမ်တွင်
မဲ့ပေးခွင့် ရှိသူ (၁၀) ယောက်ရှိက (၁၀)စောင်ဝေပြီ ဒီအတိုင်းမဲပေးရန်နှင့်
၄င်းစာရွက်များအား မဲရုံ သို ယူဆောင်ခြင်းမပြုရန် နေပြည်တော် မြို့ တော်စည်ပင် တွဲဘက်အတွင်းရေးမှူးဖြစ်တဲ့ဗိုလ်မှူးကြီးဟောင်း ဦဝင်းဌေး က ပြောကြားခဲ့
နေပြည်တော် စည်ပင် ၀န်ထမ်းများက သတင်းပေးပို့ ထားပါတယ်။
တာဝန်မကျေတဲ့အဲဒီ မိစိန်ပေါက်ပြောတဲ့ ကမကလ တွေ၊ ငလမသတွေ၊ နှမလတွေ၊ ခွမသတွေ
အားလုံး တာဝန်ကျေခဲ့ပြီလို့ယူဆပါတယ်
အားလုံး တာဝန်ကျေမယ်လို့ လဲ မျှော်လင့်ပါတယ်